အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ကောင်းစေမယ့် Tongue Twister များ -
Posted on December 7, 2018 June 21, 2019 Author Myat Moe	Comment(0)
အသံထွက်ပဲ ကောင်းလာမလား.. လျှာပဲလိပ်မလား မသဲကွဲ….
Tongue Twister ဆိုတာဘာလဲ?
Tongue Twister ဆိုတာက ပီပီသသဆိုဖို့ ခက်ခဲတဲ့ (အထူးသဖြင့် မြန်မြန်ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့) ဝါကျ (သို့) ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – Peter Piper pickedapeck of pickled pepper ဆိုတဲ့ ဝါကျမျိုးပေါ့… မယုံရင် ယောင်း အဲ့ဝါကျကို ခပ်မြန်မြန်လေး ဆိုကြည့်လိုက်ပါ။ လျှာခလုတ်တိုက်မှာ အသေချာပါပဲ။ တချို့ Tongue Twister တွေဆို အသံမှားထွက်မိတဲ့အခါ ရယ်စရာ ဖြစ်သွားတတ်ပါသေးတယ်။
Tongue Twister တွေကို မိဘတော်တော်များများက သူတို့ကလေးတွေကို အပျော်သဘောမျိုးနဲ့ သင်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Tongue Twister တွေက ကလေးတွေအတွက်ပဲ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာနေသူတွေအပြင် သရုပ်ဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ Public Speaker (လူရှေ့ထွက်စကားပြောရသူ) တွေကလည်း စကားပြောတဲ့အခါ ပီသပြီး ရှင်းနေစေဖို့ Tongue Twister တွေကို လေ့ကျင့်ကြပါတယ်။
လေ့ကျင့်ရင် ဘာအတွက် ကောင်းလဲ?
Tongue Twister တွေက စကားပြောတဲ့အခါ သုံးတဲ့ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ မေးရိုး ကြွက်သားတွေကို ပိုသန်မာစေပြီး လိုသလို ဆန့်နိုင်အောင် ကူညီပေးတာမုိ့ အသံထွက်တွေကို ပိုပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်စေပါတယ်။ Tongue Twister တွေကို လေ့ကျင့်ရင်း ဘယ်စကားလုံးတွေကို အသံထွက်ရခက်နေတယ်၊ ဘယ်အသံထွက်ကို မထွက်နိုင်ဘူး (တချို့ဆို “R” သံ သိပ်မထွက်တတ်ကြဘူး) ဆိုတာ သတိထားမိစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ ပိုပြီး အသံထွက်တွေမှန်လာတာတွေ၊ အာသွက်လျှာသွက်ဖြစ်လာတာတွေကိုလည်း ယောင်းတို့ သတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်။ Tongue Twister တွေထဲမှာ အသံတစ်သံတည်းကို ထပ်တလဲလဲဆိုရတာတွေလည်း ပါတာမို့ လေယူလေသိမ်းကိုလည်း တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
(၁) ပထမဆုံး ယောင်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်ချင်တဲ့ Tongue Twister ကို ရွေးပြီး စာရွက်ပေါ် ရေးချပါ။
(၂) အဲဒီ Tongue Twister ကို အနည်းဆုံး (၅)ခေါက် ကြည့်ဆိုပါ။ ဥပမာ – “Good blood, bad blood” ဆိုတဲ့ Tongue Twister ပဲ ထားလိုက်ပါစို့။
(၃) ဒီ Tongue Twister ကို ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခပ်ကျယ်ကျယ် (၅) ခေါက် ကြည့်ဆိုပါ။
(၄) စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီ (၅) ခေါက်ဆိုပါ။
ဥပမာ – Good (၅)ခေါက်၊ blood (၅) ခေါက် စသဖြင့်
(၅) ပြီးရင် တစ်ပိုင်းချင်းစီ ဖြတ်ဆိုပါ။ တစ်ပိုင်းကို (၅) ခေါက်ဆိုပါ။
ဥပမာ – Good blood သည် တစ်ပိုင်း၊ Bad blood သည် တစ်ပိုင်း
(၆) ပြီးရင် စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး ခဏရပ်ပါ။
ဥပမာ – Good. Blood. Bad. Blood
(၇) နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မျက်လုံးလေးမှိတ်၊ အာရုံစုစည်းပြီး Tongue Twister တစ်ခုလုံး မြန်မြန် ဆိုကြည့်ပါ။ အသံထွက်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် (၂)ကြိမ် ထပ်ဆိုပါ။ မမှန်သေးဘူးဆိုရင် အပေါ်က အဆင့်တွေအားလုံး အစကနေ ပြန်လုပ်ပါ။
Related Article >>> အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ ဘာကြောင့်ခက်ရတာလဲ?
ယောင်းတို့ လေ့ကျင့်လို့ရအောင် လွယ်တဲ့ Tongue Twister လေးတွေ ပြောပြမယ်နော်။
(1) I scream, you scream, we all scream for ice cream.
(2) You know New York, you need New York, you know you need unique New York.
(3) I sawakitten eating chicken in the kitchen.
(4) Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred bread.
(5) I thought I thought of thinking of thanking you.
(6) I have gotadate ataquarter to eight, I will see you at the gate, so don’t be late.
ကဲ ဒါလေးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် များများ မြန်မြန်လေ့ကျင့်ကြည့်ကြပါနော်။ ဒါတွေက Tongue Twister အကုန် မဟုတ်သေးဘူးနော်။ အများကြီးကျန်သေးတယ်။ တကယ်လို့ ထပ်လေ့ကျင့်ကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် Google မှာ Tongue Twisters ဆိုပြီး ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အများကြီးထွက်လာဦးမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီမှာတင် ရပ်မနေဘဲ ရသမျှ လေ့ကျင့်ပါလို့
အသံထှကျပဲ ကောငျးလာမလား.. လြှာပဲလိပျမလား မသဲကှဲ….
Tongue Twister ဆိုတာက ပီပီသသဆိုဖို့ ခကျခဲတဲ့ (အထူးသဖွငျ့ မွနျမွနျဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့) ဝါကြ (သို့) ဖျောပွခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ – Peter Piper pickedapeck of pickled pepper ဆိုတဲ့ ဝါကမြိုးပေါ့… မယုံရငျ ယောငျး အဲ့ဝါကကြို ခပျမွနျမွနျလေး ဆိုကွညျ့လိုကျပါ။ လြှာခလုတျတိုကျမှာ အသခြောပါပဲ။ တခြို့ Tongue Twister တှဆေို အသံမှားထှကျမိတဲ့အခါ ရယျစရာ ဖွဈသှားတတျပါသေးတယျ။
Tongue Twister တှကေို မိဘတျောတျောမြားမြားက သူတို့ကလေးတှကေို အပြျောသဘောမြိုးနဲ့ သငျပေးတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Tongue Twister တှကေ ကလေးတှအေတှကျပဲ မဟုတျပါဘူးနျော။ အင်ျဂလိပျဘာသာစကား လလေ့ာနသေူတှအေပွငျ သရုပျဆောငျတှေ၊ နိုငျငံရေးသမားတှေ၊ Public Speaker (လူရှထှေ့ကျစကားပွောရသူ) တှကေလညျး စကားပွောတဲ့အခါ ပီသပွီး ရှငျးနစေဖေို့ Tongue Twister တှကေို လကေ့ငျြ့ကွပါတယျ။
လကေ့ငျြ့ရငျ ဘာအတှကျ ကောငျးလဲ?
Tongue Twister တှကေ စကားပွောတဲ့အခါ သုံးတဲ့ နှုတျခမျး၊ လြှာ၊ မေးရိုး ကွှကျသားတှကေို ပိုသနျမာစပွေီး လိုသလို ဆနျ့နိုငျအောငျ ကူညီပေးတာမုိ့ အသံထှကျတှကေို ပိုပွီး မှနျမှနျကနျကနျထှကျစပေါတယျ။ Tongue Twister တှကေို လကေ့ငျြ့ရငျး ဘယျစကားလုံးတှကေို အသံထှကျရခကျနတေယျ၊ ဘယျအသံထှကျကို မထှကျနိုငျဘူး (တခြို့ဆို “R” သံ သိပျမထှကျတတျကွဘူး) ဆိုတာ သတိထားမိစပေါတယျ။ လကေ့ငျြ့ရငျးနဲ့ ပိုပွီး အသံထှကျတှမှေနျလာတာတှေ၊ အာသှကျလြှာသှကျဖွဈလာတာတှကေိုလညျး ယောငျးတို့ သတိထားမိလာပါလိမျ့မယျ။ Tongue Twister တှထေဲမှာ အသံတဈသံတညျးကို ထပျတလဲလဲဆိုရတာတှလေညျး ပါတာမို့ လယေူလသေိမျးကိုလညျး တိုးတကျစပေါလိမျ့မယျ။
(၁) ပထမဆုံး ယောငျး ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ ပွောတတျခငျြတဲ့ Tongue Twister ကို ရှေးပွီး စာရှကျပျေါ ရေးခပြါ။
(၂) အဲဒီ Tongue Twister ကို အနညျးဆုံး (၅)ခေါကျ ကွညျ့ဆိုပါ။ ဥပမာ – “Good blood, bad blood” ဆိုတဲ့ Tongue Twister ပဲ ထားလိုကျပါစို့။
(၃) ဒီ Tongue Twister ကို ဖွညျးဖွညျးနဲ့ ခပျကယျြကယျြ (၅) ခေါကျ ကွညျ့ဆိုပါ။
(၄) စကားလုံးတဈလုံးခငျြးစီ (၅) ခေါကျဆိုပါ။
ဥပမာ – Good (၅)ခေါကျ၊ blood (၅) ခေါကျ စသဖွငျ့
(၅) ပွီးရငျ တဈပိုငျးခငျြးစီ ဖွတျဆိုပါ။ တဈပိုငျးကို (၅) ခေါကျဆိုပါ။
ဥပမာ – Good blood သညျ တဈပိုငျး၊ Bad blood သညျ တဈပိုငျး
(၆) ပွီးရငျ စကားလုံးတဈလုံးနဲ့ တဈလုံး ခဏရပျပါ။
(၇) နောကျဆုံးအနနေဲ့ မကျြလုံးလေးမှိတျ၊ အာရုံစုစညျးပွီး Tongue Twister တဈခုလုံး မွနျမွနျ ဆိုကွညျ့ပါ။ အသံထှကျမှနျတယျဆိုရငျတော့ နောကျထပျ (၂)ကွိမျ ထပျဆိုပါ။ မမှနျသေးဘူးဆိုရငျ အပျေါက အဆငျ့တှအေားလုံး အစကနေ ပွနျလုပျပါ။
Related Article >>> အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာဖို့ ဘာကွောငျ့ခကျရတာလဲ?
ယောငျးတို့ လကေ့ငျြ့လို့ရအောငျ လှယျတဲ့ Tongue Twister လေးတှေ ပွောပွမယျနျော။
ကဲ ဒါလေးတှကေို တတျနိုငျသလောကျ မြားမြား မွနျမွနျလကေ့ငျြ့ကွညျ့ကွပါနျော။ ဒါတှကေ Tongue Twister အကုနျ မဟုတျသေးဘူးနျော။ အမြားကွီးကနျြသေးတယျ။ တကယျလို့ ထပျလကေ့ငျြ့ကွညျ့ခငျြသေးတယျဆိုရငျ Google မှာ Tongue Twisters ဆိုပွီး ရှာကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ အမြားကွီးထှကျလာဦးမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီမှာတငျ ရပျမနဘေဲ ရသမြှ လကေ့ငျြ့ပါလို့
Tagged English, Knowledge, language, Sunday English, Tongue Twister
Posted on January 3, 2019 Author Myat Moe
A, An, The ကို ဘယ်လိုမှန်အောင် သုံးမလဲ
Posted on June 3, 2018 July 25, 2018 Author Myat Moe
ရှင်းမလိုနဲ့ ရှုပ်၊ သိသလိုနဲ့ မသိထားတဲ့ A,An,The article အသုံး
ဇနီးမောင်နှံတွေကြားက အလွဲလေးတွေကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်း (၂) အုပ်